विचार-ब्लग Archives - Page9of 11 - Saptakoshionline
क्यू र उपहार- कृष्ण जुनेली
एक दिनको कुरा हो मलाई औधी पेट दुख्यो । म डाक्टरी उपचारको लागि डाक्टर कहाँ गए । तर क्यू सिष्टमले मलाई चाँहि किन छोड्थ्यो र ? बल्लबल्ल सात घण्टाको पखाईपछि पालो पाएँ र डाक्टरलाई जँचाए । उसले औषधि लेखी दिदै भन्यो . यो औषधि ठिक नभएर सम्म निरन्तर खाईरहनु । म औषधि किन्न पसलतिर गए । त्यहा पनि मानिसहरुको क्यू रहेछ । क्यूमा पर्खदा पर्खदै लामो पखाईपछि औषधि किन्ने अवसर पाइयो । औषधिमा पनि उपहार राखेको र...
अरुण तेस्रो भित्रको वास्तबिकता- गणेश कटवाल
नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने काम समेत लगानी बोर्डले हस्तक्षप गरेको भन्दै यसरी नियम विपरित भएको आयोजना अगाडि अनुमति पत्र नलिनै उद्घाटन राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उच्चतम् माग करिब १,३०० मेगावाट हाल कूल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता २१०३ मेगावाट मध्ये नेपाल...
१. सूर्य नमस्कारको संस्कार हिन्दुहरूले एकाबिहानै सूर्य भगवानलाई जल चढाउने परम्परा कायम राखेका छन् । यसो किन गरिएको हो भने बिहानीपख सूर्यका किरणलाई पानीमा हेर्दा वा सिधै हेर्दा आँखालाई राम्रो गर्छ अनि यो कार्य नियमित गर्दा हामी बिहानीको जीवनशैली अपनाउन थाल्छौं र बिहानको समय दिनको सबभन्दा प्रभावकारी भाग हो भनी प्रमाणित भएको छ । २. मन्दिर जाने संस्कार मन्दिरहरू यस्तो ठाउँमा राखिएका हुन्छन् जहाँ उत...
तिम्रो गोलीले हाम्रो बोली रोकिन्न!
तिम्रो गोलीले हाम्रो बोलिरोक्न खोज्यौं ! रगतको होलिले बिचार छेक्न खोज्यौं! कहाँ रोकिन्छर अविरल बगेको त्यो नदि ! शान्तिको यो देशमा फेरि धर्मयुद्ध पो रोज्यौं! सोचिदेउ हामीले हतियार उठाए, भोलि तिम्रो बास कहाँ हुन्छ ! नसोचिदेउ सधैं हिन्दुहरुको हातमा , जमेर बसेको दही हुन्छ ! यहाँ गेरुवा झण्डाधारीको महासागर, ल्याउने कोसिस नगर ! सोचिदेउ त्यसपछिको तिम्रो अस्तित्व , यो देशमा फेरि कहाँ ...
भारत भ्रमण : ओलीको परीक्षा
दुई वर्षमा दोस्रो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक नै भारतको राजकीय भ्रमणमा चैत २३ देखि २५ सम्म छिमेकी राष्ट्रको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको भारत भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा नयाँ आयाम थपिने आमविश्वास छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भ्रमण प्रतिफलका दृष्टिले पहिले पहिलेजसरी के...
किन खानु हुन्न जंकफुड ?
केटाकेटी हुन् या वयस्क, महिलाहुन् या पुरुष, घरमाहोस् या रेष्टुराँमाआजकालजताततै जंकफुडको बोलवाला बढ्दै गएकोछ । सजिलै पाइने र पकाउन पनि मिहिनेत गर्न नपर्ने भएकाले बढ्दो रुपमा नेपालीको रोजाईमा जंकफुड पर्दैगएको देखिञ्छ। के हो जंकफुड ? हानिकारक चिल्लो,नुन र चिनी बढी भएको र पोषण कमहुने खाना नै जंकफुड हो । यसले मानिसहरुलाई क्षणिक स्वाद र झुठो सन्तुष्टि प्रदान गर्छ । आकर्षणका लागि विभिन्न किसिमका...
सामाजिक कार्यकर्ताहरुको बुद्धि धुँवासंगै नउडोस- कृष्ण जुनेली
सडक गन्तव्य सम्म पुग्न सहज होस भनेर बनाइन्छ हाम्रो मुलुक नेपालमा पनि सडक गन्तव्य सम्म सहज रुपमा पुग्नका लागि बनाइएका हुन । तर हाम्रो मुलुकका सडकहरु बहुकार्यका लागि प्रयोग गरिने गरिएको देखिन्छ । धेरै कामका लागि प्रयोग हुँदै आएको सडकले सडक प्रयोगकर्ता र आसपासका मानिसहरुलाई बेलाबेलामा समस्या समेत पार्ने गरेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सडकलाई क्यवस्थित बनाउन धेरै किसिमका काम र अभियानहरु सञ्चालन ग...
लेण्डुप दोर्जे अखिर को हुन ?, जो नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक नेताहरुले नाम लिइ रहन्छन । लेण्डुप त्यस्ता ब्यक्ति हुन जसले स्वतन्त्र सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गराउने मुख्य भुमिका खेलेका थिए । त्यसैले लेण्डुपलाई देश द्रोह र गद्धारिको पर्याएको रुपमा चिनिन्छ । सानै उमेरमा राजले मनपराएर काजिको पद्विसम्म पाएका लेण्डुप एका–एक भारतिय चक्रव्युहमा फसेर राजा विरोधि भए र परिणामत स्वतन्त्र सिक्किम राज्य भारतले...
गुणस्तरः पैसामा कि सिकाइमा ?
आज विश्वभरी नै कुशल र सक्षम नागरिक निर्माणका लागि राज्यहरु जुटिरहेका छन् । चाहे ती विकसित, अल्पविकसित या अविकसित हुन् । यसरी राज्यहरु लागिपरिहँदा सक्षमताका मापनहरु समय सन्दर्भअनुसार फरक हुँदै आएका पनि छन् । कुनै जमाना थियो, सामान्य विजुलीबाट सञ्चालन हुनसक्ने साना–साना आविष्कारहरु महान् बन्थे र विश्व मख्ख पथ्र्यो । यस्तो पनि सम्भव छ र भनिन्थ्यो । अखिर अहिले त्यही आधारमा मानिसले मंगल ग्रहमा र...
अहिले अधिकांश विद्यालयको अन्तिम परीक्षा चलिरहेको छ । बर्षभर विद्यार्थीले केकति जाने भनेर लेखाजोखा गर्ने परीक्षा यही हो । यो परीक्षा सम्पन्न भएसँगै विद्यार्थीहरुको प्रगति नतिजा आउँछ । त्यसपछि उनीहरु स्कुलमा भर्ना हुनेछन् । तर, परीक्षा सुरु नभई विद्यार्थी भर्नाको विज्ञापन सुरु भइसकेको छ । आकर्षक नारा र विज्ञापनले विद्यार्थी तान्ने होडबाजी सुरु भइसकेको छ । खासगरी प्रि(प्राइमरी एवं प्राथमिक तहमा वि...